SABABTOO AH HA KU DEGDEGIN DUUFAAN GURIGA - BEERAHA DIGAAGA
Maxaa la sameeyaa haddii digaagdarradu aanay ku degdegin
Badanaa dadku waxay la kulmaan dhibaatadan sida maqnaanshaha ukunta ee digaaga. Xaaladahan waxaa sababi kara sababo badan.
Si looga fogaado tan, waxaa lagama maarmaan ah in la barto waxyaabaha saameeya saamaynta ukunta ee digaaga, iyo xalalka suurtagalka ah ee dhibaatooyinka.
Immisa boodh ayaa ciriiri
Sababta keenta boodhadhku waa mid caan ah waa in ay bilaabaan in ay si degdeg ah u deg degaan. Dabcan, tilmaamayaashu way kala duwanaan karaan iyagoo ku xiran nooca, taranka, xaaladaha iyo waxyaabo kale. Laakiin guud ahaan, shimbiruhu waxay u bislaadaan inay xirtaan ukunta 35-40 maalmood oo nolol ah.
Ma taqaanaa? Ukunta ukunta waxay ka caawisaa la dagaallanka unugyada kansarka, taas oo ay ugu wacan tahay lysozyme walax!
Ka dib bilawga muddada xirashada 25-30 maalmood ee ugu horreeya, tirada ukunta waxaa celcelis ahaan 8-10 ukun ah. Qiyaastu waxay kor u kacdaa 25-30 bishii waxayna ku dhawaad ​​tahay 300-320 sannadkii. Naxariistu waa in noocyada noocyada shimbiraha lagu qaado wareegga mararka qaarkood - laga bilaabo 4 illaa 6 maalmood oo ay socdaan, ka dib - nasasho. Sidaa darteed, haddii aysan jirin waxyaabo dhowr ah - tani caadi ahaan waa caadi.
Sida da'da lo'da, hoos u dhiciddu waxay ku dhacdaa bisha 10aad ee nolosheeda, laakiin waxay ku dhaaftaa si lama filaan, laakiin si tartiib tartiib ah. Ka dib bisha 30aad ee nolosha, ukunta-gaabinta dhammaato. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la badalo shimbiraha waaweyn oo leh kuwa yaryar.
Waa maxay sababta joojisay joojinta
Waxyaabo kala duwan ayaa saameyn ku yeelan kara awoodda shimbiraha si ay u deg degaan, mid kastana wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah iyo xalka ama ka hortagga.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad ogaatid inta ay tahay miisaanka ukunta digaagada iyo sida loo jaro ukunta digaagdoonka si sax ah.
Inta badan, waa xaaladaha aan ku qanacsanayn ee xabsiga oo keenaya cawaaqib xumadan, maadaama ay shimbiruhu si joogta ah u dareemaan cadaadis iyo raaxo la'aan, tanina si weyn ayay u saameysaa caafimaadka. Waxaan tilmaami karnaa sababaha soo socda ee la xiriira xaaladaha saboolka ah:
qoraallo. Guud ahaan, tani waxay keeni kartaa oo kaliya cudurada, laakiin sidoo kale hoos u dhac wax soo saarka. Go'aanka wuxuu noqon doonaa qolka aan hawada lahayn.
caymiska liita. Iyadoo iftiin iyo iftiin badan (in ka badan 17 saacadood), waxay la kulmaan walaaca, taasina waxay sababtaa hoos u dhaca tirada ukunta. Haddii iftiinku uu aad u madoobaado, waxaa sidoo kale jiri doona natiijo xun, sida shimbiruhu u dhaqmaan kaliya saacadaha iftiinka maalinta, taas oo had iyo goor la soo celiyo iyadoo la adeegsanayo iftiinka macmal. Xalka wuxuu noqon doonaa qaabka ugu wanaagsan ee iftiinka - waa 6 ilaa 23 saacadood.
ku xadgudubka heerkulka caadiga ah iyo qoyaanka. Inta badan, marka cimiladu isbeddesho, heerkulka iyo qoyaanka qolka isbeddelka, laakiin waa inaan loo oggolaan, sababtoo ah isbeddel muuqda ee tilmaamahan shimbiraha ayaa dareema diiqad. Xalku wuxuu noqon doonaa in la ilaaliyo heerkulka isla sanadka oo dhan, iyo sidoo kale inaanay u oggolaan in qoyaanka uu hoos u dhaco ilaa 40% ama in ka badan 70%.
Meel aan ku filneyn. Adkaanshaha qafiska wuxuu keeni karaa kaliya niyadda xun ee shimbirta, laakiin sidoo kale gardarrada, xaaladaha noocaas ah ma noqon doonaan heer sare oo wax soo saarka ukunta. Xalku wuxuu noqon doonaa inuu doorto cabbirka unug ee 1 mitir mitir oo boos ah ayaa loo qoondeeyn doonaa qof kasta.
Waa muhiim! Marka la abuurayo digaagduur kulul, waa lagama maarmaan in la abuuro nidaam ku meel-gaar ah +30 ilaa +20° S!
Sidaa awgeed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in xaaladaha nololeed ee aadka u qanacsanaa aysan ahayn kaliya waxyeellada shimbirta lafteeda, laakiin sidoo kale hoos u dhig heerka heerka ukunta.
Akhri sida loo sameeyo qafis for digaagaha gacmahaaga.
Nafaqadu waa saldhigga nolosha, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u la socoto doorashada cuntada ee shimbirta. Inta badan, milkiilayaasha digaaga ayaa la kulma hoos u dhac ku yimaadda ukumaha sababtoo ah beddelidda cunto kale. Noocaanku wuxuu leeyahay nidaam dheef-shiid kiimikaad aad u sarreeya, sidaas darteedna wuxuu ku jiraa walwal marka uu isbeddelayo menu-ka. Si looga fogaado tan, waxaa lagu talinayaa in lagu daro cunto cusub si tartiib tartiib ah, oo lagu qasay kan kii hore.
Kor u kaca ayaa sidoo kale keeni kara hoos u dhaca natiijada la rabo ee shimbirta. Sidaa darteed, waa in la quudiyo 3 jeer maalintii, laakin doorbidada isla markaa, 1 qaado oo qofkiiba. Raashinka laftiisu wuxuu ka kooban yahay quudin isku dhafan ama guri-guri, isku-darka isku-daboolka ah ee firileyda. Waxa kale oo lagu siin karaa khudaarta, firida, iyo cagaarka. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero qadarka weyn ee borotiinka ee digaaga digaaga, maadaama ay tahay mid si gaabis ah u maqnaaneysa taas oo muujinaysa hoos u dhaca soo-saarka ukunta.
Baro sida loo quudiyo xayawaanka iyo waxa loo baahan yahay in la isticmaalo.
Dabcan, gabowga waxay keenaysaa hoos u dhicin oo keliya wax soo saarka guud, laakiin sidoo kale hoos u dhaca tirada ukunta. Kadib 10 bilood ee nolosha ka dib ayaa bilaabmaya hoos u dhac tartiib tartiib ah, kaas oo ku dhammaanaya 30 bilood.
Xalka kaliya ee dhibaatadan waxay noqon kartaa oo keliya bedelida shimbiraha kuwa yaryar.
Cadaadiska ka dib
Inta badan, dhammaan tilmaamihii hore ayaa si sax ah u sababaya walbahaarka, taas oo keenta hoos u dhaca waxqabadka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee keena walbahaarku waa gaadiidka shimbiraha (shakhsiyaadka qaangaarka ah iyo dadka waaweynba labadaba).
Ma taqaanaa? Sanadkii 1990, digaagdarradii waxay ahaayeen shimbirihii ugu horreeyay ee ku dhashay meel bannaan oo ukunta leh jeermis!
Dhibaato ma laha dhibaatadan, maadaama ay shimbiruhu u baahan yihiin 2-3 usbuuc horumarinta meel cusub oo kaliya ka dib tan kalluunka ayaa soo celin doona.
Inta lagu jiro xilliga molting, shimbiruhu waxay gebi ahaanba joojiyaan xakamaynta, waana arrin caadi ah. Wakhtiga molting ayaa dhacaya toddobaadka 4aad ee nolosha iyo marka la eego xilliga xagaaga. Gubta ugu horreysa waxay bedeshaa daloolka shimbir yar oo leh shahwad qoto dheer oo qof weyn ah.
Caabuqyo kala duwan ayaa inta badan muujiya hoos u dhaca soo-saarka ukunta ama isbeddelka muuqaalka ukunta. Sida caadiga ah, waa beriberi, taas oo la xiriirta nafaqo-xumada.
Si looga fogaado dhibaatooyinka halista ah ee yaraynta tirada ukunta ee digaaga, waxaa lagu talinayaa in lagu dhaqmo sharciyada soo socda:
Si joogto ah u nadiifi unugyada marka ay helaan wasakh.
Beddel biyaha iyo kormeer tayada.
Ku adkee isla heerkulka iyo qoyaanka.
Bixi xaaladaha lagama maarmaanka ah, qadar ku filan oo boos ah.
Samee baaritaanka joogtada ah ee digaagga ee dhakhtarka xoolaha.
Sii nafaqo shimbiraha, taas oo ay jiri doonto fitamiino iyo borotiin ku filan.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sidii loo hagaajin lahaa geedka wax soo saarka ukunta.
Sidaa darteed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in hoos u dhaca soo-saarka ukunta ee digaaga ay sababi karaan sababo badan. Mararka qaarkood, tani waa qayb ka mid ah geeddi-socodka dabiiciga ah, sida kiis-gabaynta ama gabowga, laakiin xaaladaha nololeed, walbahaarka iyo waxyaabo kale ayaa sidoo kale keeni kara cawaaqib xun. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in ay fuliso tallaabooyin ka hortag ah si looga fogaado dhacdadan.
Video: Sababaha soo-saarka ukunta liita
Badeecooyinka lama soo iibsan karo marka ay horayba u socdaan. Waxay u baahan yihiin inay iibsadaan kahor. Ugu horreyntii, ma ogid inta ay le'eg yihiin markii ay iibsadeen. Boqolaal digaagduur ayaa muddo gaaban ku nool. Aniga waxaan isbeddelayaa da'da 10 bilood. Marka labaad, marka ay guurayaan, waxay si dabiici ah u dareemi doonaan cadaadis, marka ay bedelaan xaaladaha xabsiyada, sidoo kale, marka la beddelo cuntada, sidoo kale. Taas ka dib, waxay u baahan yihiin laba toddobaad si ay u bilaabaan buulka mar labaad, iyo qiyaastii 2 toddobaad oo dheeraad ah si ay u gaaraan waxtarka ukunta caadiga ah. Cuntadu waa inaysan joogin kafateer mar walba la heli karo! Xaydhuhu waa inay cunaan cunto saacad-2 ka dibna ka dibna fadhiiso cunto la'aan ilaa inta labaad quudinta. Inta badan waxay kuxirantahay cabbirka iyo naqshadda unugyadaada.
Badanaa waxaa la aaminsan yahay in digaaggu uusan jecelayn buuqa, way ka baqayaan, waxay sidoo kale saameyn kartaa wax soo saarka ukunta .. Marka ay cabsanayaan, waxay bilaabaan inay walwalaan oo ay ku riixaan qafiska, laakiin waxaan u maleynayaa in tababarku yahay mid ka mid ah haddii shimbiruhu had iyo jeer nabad iyo xasillooni Waxay u muuqan doontaa mid si qoto dheer uga jawaabeysa qaylada, haddiiba markii hore loo adeegsaday in lagu soo booqdo, ama xayawaan joogta ah, tani ma saameyneyso iyada, xitaa marka caruurtu ama shisheeyaha yimaadaan, way iska aamuseen iyagoo aan cabsaneyn.